Taorian’ny Famonoana Nanjo Ny Zanany Lahy, Mampianatra Ny Lanjan’ny Firaisankina An’ireo Tanora Ny Renimpianakaviana Iray Metisy Frantsay-Maraokàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2016 2:54 GMT
Latifa bin Ziaten (havanana) miresaka amin'ireo mpianatra momba an'i Imad, zanany lahy maty novonoin'ny Merah,vondrona Islamika mahery fihetsika. Tany ampiafaran'ny resany, namihina azy ireo mpianatra. Ankizivavy iray no niteny hoe mampahatsiahy azy ny reniny i Latifah. Sary: Marine Olivesi. Nampiasàna ny fanomezandàlana avy amin'ny PRI.
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org ity lahatsoratra nosoratan'i Marine Olivesi ho an'nyThe World ity, tamin'ny Desambra 2015, ary naverina navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna vontoaty.
Latifa Ibn Ziaten manazava ny momba ny tenany amin'ireo mpianatry ny ambaratonga faharoa sy ny lisea aminà andalana tokana monja : “Renin'i Imad aho.”
Mety tsy mbola nandre mihitsy izany anarana izany tany aloha tany ireo tanora Frantsay anjatony nanoloana azy, saingy fantatr'izy ireo ny anaran'ilay olona namono azy.
Ny Martsa 2012, Mohamed Merah, lehilahy Frantsay iray manam-piaviana Alzeriana, namono olona fito tao anatinà andiana fitifirana nanerana an'i Frantsa, isan'ireny ireo ankizy telo tao amin'ny sekoly Jiosy. Ny famonoana feno hadalàna nataon'i Merah sy ny fihazàna azy nanaraka izay no nanamarika ny fiandohan'ny fironana ratsy iray — ireo teraka ho Frantsay, tanora nanjary henjam-pihetsika mandeha miady amin'ny firenena niaviany ihany.
Imad Ibn Ziaten, mpilatsaka an'elonaina, 30 taona, tao anaty fotoana fialany sasatra— zanaka lahin'i Latifa, no tra-doza voalohany tamin'ny nataon'i Merah,.
Nandeha nitety ny firenena izy nanomboka teo, mitety ireo sekoly sy fonja. Mijoro hatrany eo am-pitantaràna ny tantarany, fanomezana voninahitra ny zanany lahy izay tsy nanaiky ny hiondrika ambany talohan'ny nitifiran'i Merah azy. Ary lazainy io hatramin'ny fotoana nahatongavany tao Frantsa.
“17 taona aho no tonga avy any Maraoka,” hoy izy amin'ny teny malefaka. “Tsy nahay namaky teny. Nadray ahy i Frantsa, ary nanampy ahy ho tafavoaka ireo mpiray vodirindrina tamiko. Nampianarin-dry zareo ahy ny fomba fiteny sy fanoratra ny teny. Avy eo nanomboka fianakaviana iray izahay mivady, nanana zanaka dimy. Izany no nofinofiko, saingy koa andraikitra iray.
“Niasa foana aho tontolo andro, valo ora isan'andro. Rehefa faran'ny herinandro dia mahandro sakafo aho mba hahazoana vola fanampiny hividianana ny ankanjon'ny ankizy, hanarahana tohana amin'ny fampianarana, ho entina miala sasatra. Nitombo tamim-boninahitra izy ireo, fifanajàna ary fitiavana. Reharehako izy ireo. Nangalarin'i Mohamed Merah tamiko izany fahombiazana izany.”
Henjana hoy i Latifa ny fiainana tamin'izany saingy mora rehefa tafiditra noraisin'ny fiarahamonina ianao. Frantsay ireo mpifanolo-bodirindrina taminy. Ankehitriny, hoy izy, mipetraka aminà trano tsizarizary ny ankamaroan'ireo mpifindra monina, mitoka-monina, izay zara raha manome vintana azy ireo hianatra ny fitsipiky ny firenena vaovao misy azy ireo. Matetika ireo zanany teraka ho Frantsay no mitombo miaraka amin'ny fahatsapàna ho toy ny olompirenena kilasy faharoa.
Saingy tsy ny fiarahamonina ihany no tsy nampanjary ireo ankizy toa an'i Mohamed Merah. “Tsy nampanjary azy koa ny rainy rehefa nandao ny ankohonany,” hoy i Latifa. “Ny reniny koa — niverina nanambady izy ary nametraka azy ho aminà toeram-pitaizàna.”
Fintinin'i Latifa ny zavatra nitranga manaraka teo amin'ny fiainan'i Merah: nandao ny sekoly i Merah, nanao heloka bevava madinidinika ary niafara tany am-ponja. Tany izy no nifanena taminireo Silamo henjam-pihetsika ary, araka ny famaritan'i LAtifa azy, “nivadika ho biby”
Taorian'ireo fitifirana dia nataon'ireo ankizy eny ivelan'ny tanàna ho ankizy mariky ny andian-taranaka very izy.
Tantarain'i Latifa ny fitsidihany ny faritra nitomboan'i Merah, andro maromaro monja taorian'ny namonoana an-janany ary toerana nahafatesan'ilay nilaza ny tenany ho jhihadista rehefa nifarana ny 30 ora nanaovan'ny polisy fahirano azy.
“Nahita andian-jatovo nifampitaritarika teny an'arabe aho,” hoy i Latifa. “Nanatona azy ireo aho ary nanontany: ‘Fantatrareo ve hoe taiza i Merah no nonina?’ Nitsiky ny iray no sady niteny hoe , ‘Madama, maritiora i Mohamed Merah ! Maherifon'ny Silamo! Nataony nandohalika i Frantsa.’ ‘Andriamanitra o,’ hoy aho an'eritreritra. Rehefa nandre izany aho, toy ny hoe novonoina fanindroany indray ny zanako lahy.
“Nijery azy ireo aho no sady nanontany: ‘Mba fantatrareo ve hoe iza ilay iresahanareo? Renin'i Imad aho. Tsy maritiora i Merah. Tsy maherifo. Mpamono olona izy.’”
Ambaran'i Latifa fa nivanaka sy menatra ireto tovolahy. Nijajirika ry zareo, nanodidina azy no sady namerimberina niteny fialantsiny.
Zavatra kely momba ilay mpanono no notadiaviny, ary ho solon'izay, fikatsahana zavatra hafa vaovao no hitany. Tsapan'i Latifa fa ny lafiny hafa amin'ilay tantara no tsy maintsy horaisiny havoaka — ny azy sy ny an'ny ankamaroan'ireo mpifindra monina sy Miozolmana teraka ho Frantsay izay tafita tao Frantsa, miaina am-pilaminana ary manompo ny fireneny, toa izay nataon-janany. Izany no “ny hoavy”.
Tiany ny ho fitaratra ho an'ireo tanora mihaino azy, maro amin'izy ireny no andian-taranaka voalohany lasa Frantsay.
Resahany ny momba ny sekoly, finoana, fianakaviana, ary vitany ny manaitra azy ireny. Ny niafaràny, tonga namihina azy ireto tovolahy. Latsa-dranomaso ny tovovay iray, nilaza tamin'i Latifa fa mampahatsiahy azy ny reniny izy.
Fanindroany tamin'ity taona ity no nitsidihan'i Latifa azy ireo. Ilay sekolin'ny distrika isan'ny tena mahantra indrindra ao amin'ilay faritra, misy hatramin'ny 70 isanjaton'ny mpianatra no mandray fanampiana avy amin'ny fanjakana. Fabien Maerten, talen'ny Kolejy “Pierre et Marie Curie”, milaza fa tamin'ny ririnina lasa teo i Latifa no tao voalohany, somary toy ny mpamonjy haintrano nantsoina hanampy.
“Nisy fihenjanana ihany teto taorian'ny fanafihana ny Charlie Hebdo,” hoy izy. Mpianatra 50 teo ho eo no tsy nanaiky hanatanteraka ny iray minitra fahanginana ny ampitson'iny. Ny sasany namoaka vava sy zavatra tsy azonay noleferina mihitsy. Nanampy anay hanentsina ny banga sy nanangana fifampiresahana ny fitsidihany.”
“Làlana lavitra no vitan'ny sekoly nanomboka teo”, hoy izy.
Milamina ny ankizy miaina araka izay maha-izy azy avy: samihafa saingy tsy azo lavina fa samy Frantsay.
Alohan'ny handaozany ny toerana, mangataka i Latifa raha afaka mihira ny hiram-pirenena ry zareo. Samy nanandratra ny feony nanaraka azy daholo ny tanora tsirairay — somary nisy nibolila kely, saingy tsy fanahy niniana.